Nest 5.30.0.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.30.0.10 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
Application မ်ား လူေနမႈပံုစံ Nest
Nest ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သိုက်မှာ, ငါတို့သည်လှပသောစဉ်းစားဟန်နှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်စေ။ အဆိုပါသိုက် app ကိုအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
, သင့်သိုက်သင်ယူအပူထိန်းကိရိယာကိုထိန်းချုပ်လက်နက်နှင့်သင့်သိုက်လုံခြုံတဲ့နှိုးဆော်သံစနစ်ကလက်နက်ချ, သိုက် Cam နှင့်သင်၏အိမ်ကမြင်လျက်သိုက်ကာကွယ်ပါလျှင်သိပါချွတ်ဝင် - အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောအရပ်တွင်။ နှင့်သင့် Android ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ် Android Wear လက်ပတ်နာရီပေါ်မှာအကြောင်းကြားစာများရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သိုက်ကိုသင်စွန့်ခွာအခါအပူပိတ်ခြင်းနှင့်ကင်မရာကိုဖွင့်, အလိုအလျှောက်ညာဖက်အရာလုပ်ဖို့အာရုံခံကိရိယာများ, algorithms နှင့်သင့်ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါနှိုးဆော်သံကိုတင်ထားရန်မေ့နေပါသလား? သိုက်သတိပေးချက်များနှင့်သင်တစ်ဦးသည်ငါ့ကိုသတိပေးတပ်လှန့်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အိမ်မှာလူတိုင်းအကြောင်းကြားစာများရရှိရန်နှင့်မိမိတို့သိုက်အကောင့်နှင့်အတူလိုအပ်သည့်သိုက်ထုတ်ကုန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင် - မပိုမျှဝေ password များ။
သိုက်သင်ယူအပူထိန်းကိရိယာနှင့်သိုက်အပူထိန်းကိရိယာ E ကို
သငျသညျစွမ်းအင်ကိုကယ်တင်ကူညီပေးဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ program ကြောင့်အပူထိန်းကိရိယာ။
- သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Android Wear လက်ပတ်နာရီကိုသုံးပြီးမြေအောက်ရထားသို့မဟုတ်ဆိုဖာကနေအပူချိန်ပြောင်းလဲပါ။
- လက်မောင်းနဲ့ app မှအဝေးမှသင့်အိမ်လက်နက်ချ။
- သူတို့ကို set ကိုသွားရောက်လည်ပတ်နာရီနှင့်အတူထူးခြားတဲ့ passcode နှင့်အတူအီးမေးလ်တစ်စောင်ဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့ခြင်း, app မှဧည့်သည်များဖိတ်ခေါ်ပါ။
- ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးကအခန်းထဲသို့ဝင်သည့် alarm- တံခါးကိုသို့မဟုတ်ဝင်းဒိုးကိုဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာလုံခြုံရေးသတိပေးချက်ရယူရန်။
။ - သိုက်အာရုံဆေးလိပ်သောက်ကာကွယ်ပါသို့မဟုတ်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO) (လိုအပ်သည်ကို Wi-Fi နှင့်အလုပ်လုပ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်) လျှင်တစ်ဦးတပ်လှန့် Get
- တိတ်ဆိတ် App ကိုဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းနှင့်အတူသင့်ဖုန်းမှနှိုးစက်။ (သိုက် 2nd gen ကာကွယ်ပါ)
- သင်၏ဘက်ထရီ၏အခြေအနေ, အာရုံခံကိရိယာများနှင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုပါ။
- တစ်ချိန်ကမှာအားလုံးသင့်ရဲ့နိုးစက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့တစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆေး run လိုက်ပါ။ (သိုက် 2nd gen ကာကွယ်ပါ)
- တစ်ဦးမီးခိုးသို့မဟုတ် CO ဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်းညွှန်ကြားချက် "ဘာလုပ်ရမှန်း" ကိုရယူပါ။
မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပသိုက် Cam အိုင်ကျူ, မိုးလုံလေလုံသိုက် Cam, သိုက် Cam အဆောက်အဦးအပြင်နှင့် Dropcam
- လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်သည့်အခါသတိပေးချက် Get နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရပြန်ပြောဆိုပါ။
- ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ 1080p HD ကို (သိုက် Cam နှင့် Dropcam Pro ကိုသာ) နှင့်အတူ 24/7 အတွက် Check ။
- သင်သိုက်မှသိ subscribe သည့်အခါလူတစ်ဦးသတိပေးချက် (သို့မဟုတ်သိုက် Cam အိုင်ကျူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် / ကျွမ်းတဝင်မရှိသောမျက်နှာသတိပေးချက်) Get နှင့်ဗီဒီယိုသမိုင်း၏အထိရက်ပေါင်း 30 ။ (သီးခြားစီကိုရောင်း Subscription ဝန်ဆောင်မှု။ )
- 24/7 ကဗီဒီယို streaming များနှင့်အတူတခဏလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။
- သင့်အိမ်တံခါးမှာသငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုပြသရန်ဒီဇိုင်း - လူတွေကမြေပေါ်မှာခြေချောင်းသို့မဟုတ် packages များဦး။
- သူတို့ကခေါင်းလောင်းမြည်ကြဘူးလျှင်ပင်တစ်ဦးဧည့်သည်အကြောင်းကိုအသိပေး Get ။
- ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း, HD Talk နဲ့ Listen, သင်သည်သဘာဝကျကျသင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှာတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြောနိုင်ပါတယ်။
- သင်ကတံခါးကိုမဖြေနိုင်တဲ့အခါ, အမြန်တုံ့ပြန်မှုကိုသင် prerecorded အသံမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူဧည့်သည်များမှ reply ကြကုန်အံ့။
ယေးလ် Lock ကိုက x သိုက်
- အသုံးပြုမှုမိသားစု Accounts ကိုဒါလူတိုင်းသိုက် app ကိုအတူတံခါးကိုသော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
- လူပတ်စ်ကုတ် Give အစား key တစ်ခု။
- တစ်စုံတစ်ဦးကတံခါးကိုသော့ခတ်သို့မဟုတ်သော့ဖွင့်သောအခါ, သိုက် app ကိုတစ်ဦးတပ်လှန့်ပေးပို့နိုင်ပါ။
- ပင်မစာမျက်နှာအတူ / အဝေး Assist နှင့်သင်စွန့်ခွာလာသောအခါ Auto- Lock ကို, သင့်တံခါးကိုကိုယ်နှိုက်ကသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်နေအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် Wi-Fi နှင့် / သို့မဟုတ်ဘလူးတုသ်လိုအပ်သည်။
Nest အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Nest အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Nest အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Nest အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.67M 2933.35M
Nest ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Nest အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.30.0.10
ထုတ်လုပ်သူ Nest Labs, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://nest.com/legal/privacy-statement/
လက်မှတ် SHA1: 44:87:BB:CD:9D:A4:30:0A:9B:ED:37:C7:63:CB:BB:86:F0:DA:DE:D0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tony Fadell
အဖွဲ့အစည်း (O): Nest
Nest APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ